Ny habaka ratsy sy tsara amin'ny sary noforonin'i John Randall | Famoronana an-tserasera
Herintaona latsaka kely lasa izay dia naneho hevitra momba ny asa lehibe ao amin'ny Sary famantarana marika divay divay avy any Jacob izay a fampiasana be ny kanto habaka ratsy ary miabo.
Ankehitriny dia manana famolavolana logo lehibe hafa ho an'ny trano fisakafoanana izahay, The Swan & Mallard, izay nanoratan'i John Randall, mpamorona azy ohatra iray momba ny fomba fampiasana habaka ratsy sy tsara. Ny fakana swan izay misy azy dia manarona ganagana tena izy mba hamantarana amin'ny loko mitovy loko mainty sy volomboasary ary fotsy mitovy amin'ireo loko telo niavaka.
Ny habaka ratsy amin'ny famolavolana logo dia ilay manodidina azy eo anelanelan'ny lohahevitra ao anaty sary. Sehatra iray mamaritra ny foto-kevitra toy ny mitranga amin'ny sary famantarana noforonin'i Randall izay fotsy no miandraikitra ny fanomezana ny endrika manontolo ny gana saika ary ny volomboasary no mason'ny firaisana roa amin'ireo biby roa.
I Randall mihitsy no maneho hevitra ao amin'ny tranonkalany, ireo lafin-javatra telo manan-danja indrindra te-hamantatra sy haneho amin'ny sary amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ny swan sy ny mallard amin'ny alàlan'ny toerana tsara sy ratsy. Ny paleta miloko voafetra sy ny fomban'ny minimalist dia manampy amin'ny famoronana fahatsapana voalanjalanja tsara.
Mifantoka amin'ny fanandramana ny endrika, hoy i Randall mamorona tsiky ao an-tsain'ireo avelao izy ireo hahita azy. Sary faran'izay tsara, izay raha vao jerena dia hita ilay sahoa toa ny S ho an'i Swan, ka raha mifantoka kely amin'ilay sary famantarana ianao dia ho hitanao ilay mpivarotra mijery mahitsy ny mpijery.
Iray amin'ireto ohatra ireto izay tianay ny mitondra ireto andalana ireto hanehoana izany tsy mora loatra ny fahagagana amin'ny sary famantarana raha hitady, ary mila mpamorona toa an'i Randall ny famoronana sary miavaka amin'ny vokatra na serivisy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ny kanton'ny habaka ratsy sy tsara amin'ny sary noforonin'i John Randall
Ny kinova anime ofisialin'ny endri-tsoratra Harry Potter